News | woman
News | Tag: woman
काठमाडौँ । महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका–३ भङ्गाहा बस्तीमा एक २१ वर्षीया विवाहित महिला आफ्नै घरमा शङ्कास्पद अवस्थामा मृत फेला परेकी छन् । राकेश झाँकी पत्नी कञ्चन झा आज बिहान आफ्नै घरमा शङ्कास्पद अवस्थामा मृत फेला परेकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
विश्व इतिहासका शक्तिशाली महिलाहरु
भित्री वस्त्र लगाउँदा यस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
एजेन्सी । ब्राले महिलाको स्तनलाई छातीमै रहन सहयोग गर्छ । तर, धेरै कसिएको ब्रा लगाउँदा यसले छातीमा सहज तरिकाले रगत सञ्चालन हुन दिँदैन । यसले टाउकोसँग सम्बन्धित गम्भीर रोग पनि लाग्न सक्छ ।
महिलाले देब्रे नाक मात्रै किन छेड्छन् ?
त्यस्ता सामानहरु जुन महिलाले एक अर्कासँग साटासाट गर्दा समस्या आउनसक्छ
महिलाको मात्र हैकम चल्ने अनौठो ठाउँ
महिलाहरुले रातिमा यस्ता कामहरु नगरेकै राम्रो
'मलाई मेरी जेठी श्रीमतीले रुवाउनुसम्म रुवाएकी थिइन् '
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सैफ अली खानले सन् २००५ मा दिएको एक अन्तर्वार्तामा भाइरल भएको थियो । यस भिडियोमा उनले आफ्नी पुर्व श्रीमतीसँगको
कुन महिनामा जन्मेकी युवतीको गुण कस्तो हुन्छ ?
वर्षको पहिलो महिना जनवरीमा जन्मेका केटीहरु स्वभावमा गम्भिर र केही हदसम्म रुढीवादी हुन्छन् । यस्ता केटीहरुलाई धेरै नै महत्वाकाक्षी र समिक्षकको
४९ वर्षको उमेरमा गोविन्दाले गरेका थिए दोस्रो विवाह !
एजेन्सी । कुनै समय बलिउडमा गोबिन्दाको ठुलै दबदबा रहेको थियो । पछिल्लो समय उनलाई लिएर फिल्म बनाउन निर्माताहरु डराउँछन् । केही दिन अगाडि गोविन्दा भारतीय टिभी शो आपकी अदालतमा पुगेका थिए । उनले उक्त कार्यक्रममा आफ्ना धेरै निजी कुराहरु खोलेका थिए ।